Apache Software Foundation kwupụtara ọkwa GitHub Integration | Site na Linux
Na ntinye ederede site na Ekwuwaala Apache Software Foundation iji sonyere obodo GitHub mepere emepe.
Apache Software Foundation (ASF), bụ otu na-enweghị uru na-emepe sọftụwia mepere emepe n'okpuru ikikere Apache, nke na-eme ka ndị mmepe, ndị njikwa, na ndị ọrụ afọ ofufo incubators site na ihe karịrị ọrụ 350 Open Source na atụmatụ.
Apache bụ nnukwu ihe eji emeghe oghere, nke nwere koodu nde 200 nke otu ndị ọrụ afọ ofufo na-elekọta nke ndị òtù 730 na ndị nyere koodu 7000.
N’ime afọ iri abụọ ọ dịrịla ndụ, e debara aha ihe karịrị otu nde na-agbanwe agbanwe ihe karịrị nde atọ.
Akụrụngwa na-ejikọta na GitHub
Na ya blog, ASF na-akọwa na ọrụ Apache na mbụ nwere ọrụ njikwa abụọ nsụgharị dị site na akụrụngwa ASF: Apache Subache na Git.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọrụ na-aba ụba na obodo ha chọrọ ka koodu isi ha dị na GitHub.
Maka ịgụ-naanị mirror ọrụ, ikike iji ngwaọrụ GitHub na ebe nchekwa ndị a pere oke.
Na 2016, na ntọalaỌ malitere ijikọta ebe nchekwa na ngwaọrụ GitHub n'ime ọrụ nke aka ya. Nke a mere ka ọrụ ndị ahọpụtara iji ezigbo ngwaọrụ dị na GitHub.
Ka oge na-aga, anyị emeela ka njikọ a ka mma, nụchaa nke ọma ma sie ike. Na ngwụcha afọ 2018, anyị rịọrọ ka ọrụ niile pụọ na ọrụ Git anyị, na nke GitHub nyere.
Mgbanwe a wetara ngwaọrụ niile na ọrụ ahụ, ma na-echekwa otu nnweta nke akụrụngwa anyị. Greg Stein, onye njikwa akụrụngwa na ASF kwuru.
Na nkwupụta ha ha kesara ihe ndị a:
“Anyị na-arụkọ ọrụ na Apache iji gboo mkpa gị ma kwado nkwado ndị dị mkpa maka isi mmalite oghere. Anyị nwere ekele maka ntọala dị ike dị otú ahụ ịkwaga na ịzụlite na GitHub. Ozugbo mgbanwe a zuru, Apache nwere ike ilekwasị anya na iwuli software na obodo ya.
Ma anyị na ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka ụzọ isi mepere emepe na ndị nyere aka na ụfọdụ ntọala ntọala mepere emepe kachasị na ụwa, dị ka Apache, ebumnuche GitHub bụ ịbụ ebe obibi nye ndị mmepe niile site na ịkwado obodo ndị mepere emepe, na-aza igbo mkpa gi puru iche ma nyere aka meghee ihe omuma, “Bryan Clark, onye njikwa ngwa ahia maka ndi na emeghe ihe na GitHub kwuru.
“GitHub na-eme ka ọ dịrị ndị mmepe mfe ịrụkọ ọrụ ọnụ, idozi nsogbu ndị siri ike, na imepụta teknụzụ kachasị mkpa n’ụwa. Ikpo okwu a na enyere ndi otu aka ileba anya na inyocha koodu, jikwaa oru, ma mepụta ngwanrọ tinyere ndi mmepe nwere ihe kariri nde iri abuo na abuo, ulo oru, na ulo oru nwere ihe kariri nde abuo. ndị ọrụ, yana karịa 31 nde repositories ", na-agụ post blog.
Site na ijikọta na GitHub, a ga-akwado ọrụ ASF na otu ikpo okwu ebe ndị mmepe 31 nde na-eji GitHub gburugburu ụwa nwere ike nyochaa ma soro ha rụkọọ ọrụ, GitHub kọwara.
Ugbu a na mgbanwe zuru ezu, ASF nwere ike ilekwasị anya na mbọ ya na ịmepụta sọftụwia na obodo.
“Anyị na Apache na-arụkọ ọrụ iji gboo mkpa ha na ịkwado ọrụ ndị ọzọ na-emepe emepe na-arụ ọrụ dị mkpa. "Anyị nwere obi ekele na ntọala dị egwu dị otu a na-akwagharị ma na-eto eto na GitHub," GitHub dere na post.
Nke a ozi ọma adịghị ụtọ Mmepụta obodo dị ka Echiche dị iche iche. Maka ụfọdụ, obodo mepere emepe nke na-aga GitHub nke n’enweghi onwe ya ma meghe bu ihe mgbagwoju anya.
Ha na-eche ma ASF na-eche echiche ịchọta ndị ntinye karịa n'ụzọ dị otú a. Maka ndị ọzọ, o doro anya na ASF ga-enwekwu ndị na-emekọ ihe n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ amatala etu esi eji ngwaọrụ GitHub.
Na nke ahụ nwere ike ịbawanye ụba mmepe, ikere òkè, ihe na-adọrọ mmasị, wdg. Ọrụ ASF na-enweta.
Maka ha, o doro anya na Mbugharị a ga-aba uru na ASF, n'agbanyeghị ma usoro GitHub mepere emepe ma ọ bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Apache Software Foundation kwupụtara ọkwa GitHub